आफ्नै दाइको बच्चा ! दाइलाई चाहिएयो भने पछि .. पाँचौँ बच्चा, बहिनीले ग’र्भ बोकेर जन्माइ दिईन ! - ABNews Nepal
आफ्नै दाइको बच्चा ! दाइलाई चाहिएयो भने पछि .. पाँचौँ बच्चा, बहिनीले ग’र्भ बोकेर जन्माइ दिईन !
Oct 30, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, dhamala ko hamala, ganga lama, headline nepal, kapurbot tv, katathmandu news, latest khabar, latest nepal, latest news, latest news chitwan, latest news nepal, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
सहोदर बहिनीले आफ्नै दाइको बच्चा जन्माइदिने ….भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर अमेरिकामा हालै एउटा यस्तै घटना भएको छ ।
भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर अमेरिकामा हालै एउटा यस्तै घटना भएको छ । अमेरिकाको वाशिंटनमा एकजना युवतीले आफ्नै दाइको बच्चा जन्माइदिएकी छिन्
आफ्ना दाइको पाँचौं बच्चाको इच्छा पूरा गरिदिन ती युवतीले भाडाको आमा बनेर अर्थात् सरोगेसीको माध्यमबाट बच्चा जन्माइदिएकी हुन् । ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
डेलीमेलको खबर अनुसार ती पुरुषका पहिले नै ४ वटा बच्चा थिए । तर उनलाई थप एक बच्चा जन्माउने इच्छा थियो । पाँचौं बच्चा जन्मिएपछि मात्र आफ्नो परिवार पूर्ण हुन्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।
तर स्वास्थ्य समस्याका कारण उनकी पत्नीले पाँचौं बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्था थिएन । आफ्ना दाइ–भाउजूको त्यो अवस्था देखेर २७ वर्षीया बहिनीको मन पग्लियो । हिल्दे पेरिंगरे नामक ती युवतीले दाइका लागि आफ्नै गर्भमा बच्चा हुर्काएर जन्माइदिने निधो गरिन् ।
त्यसपछि सरोगेसीको माध्यमबाट दाइको ग’र्भ बोकेर दाइको पाँचौं सन्तान जन्माइदिइन् । गत जनवरी महिनामा उनले आफ्ना ३५ वर्षीय दाजु इभान शेली र उनकी ३३ वर्षीया पत्नी केल्सेका लागि बच्चा जन्माइदिएकी हुन् । त्यसक्रममा लागेको पूरै खर्च चाहिँ दाजु इभान शेलीले नै गरे ।—सांकेतिक तस्विर
बोलेरोले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा शिक्षिकाको निधन, विद्यालय बन्द